Sinusitis na nwata - mgbaàmà
Nne Ahụ ụmụaka
Ọrịa nke ihe dị njọ nke imi na-adịkarị na ụmụaka nke afọ dị iche iche, ya mere nne ọ bụla kwesịrị ịma ụdị na ihe mgbaàmà nke sinusitis - mbufụt nke paranasal sinuses.
Ebe ọ bụ na mmadụ nwere ọtụtụ cavities dị na okpokoro isi ya, dabere na ọnọdụ nke mbufụt, a na-ekewa sinusitis n'ime:
frontitis - na frontal;
sinusitis - na maxillary sinuses;
sphenoiditis - na sphenoid sinus;
etmoidite - na nchara.
N'aka ụmụaka rue afọ asaa, ọ bụ naanị ihu na etmoiditis nwere ike ịbụ, ọ bụ naanị mgbe ndị ọzọ fọdụrụ na-akpụ akpụ bụ ụdị nile ahụ.
monosynusitis (na otu mmehie) na polysynusitis (n'otu oge na ọtụtụ);
otu aka na aka abụọ.
E kewara oge ọrịa ahụ n'ime:
ọrịa sinusitis na-adịghị ala ala - na-adịgide adịgide karịa ọnwa 3;
nnukwu sinusitis - na - adịgide ruo ọnwa atọ;
na - ebute ọtụtụ sinusitis - malite ọtụtụ (2 - 4) ugboro n'afọ.
Ọtụtụ mgbe, sinusitis na-ebute na ọrịa oria respiratory buru ibu, n'ihi nsogbu oyi na-adịghị mma. Ya mere, ndị nne na nna nile, ka ha wee ghara ịmalite ịmalite ịmalite ịmịnye nwatakịrị (sinusitis), onye kwesịrị ịma ihe mgbaàmà ya.
Ihe omuma ndi ozo nke uzo esi eme ka umu ozo puta
Ozi zuru ezu:
a na-agba agba nke na-anaghị adịgide karịa izu abụọ;
Ịba ụba site na njedebe nke ụbọchị ahụ, ịdị arọ na ihe ngbu dị n'isi, ya bụ na mpaghara dị nso;
ịpị ihe mgbu na ezé nke elu elu na mmetụta nke nrụgide na anya;
ume iku ume ma na akọrọ, nke na-apụta nanị n'abalị ma ọ bụ mgbe nwatakịrị ahụ nọ n'ọnọdụ ọhụụ;
akọrọ na nasopharynx;
edema na cheeks na nso anya;
acha uhie uhie nke akpụkpọ ahụ na ebe mbufụt;
Mee ka ihe mgbu ihu na-akawanye njọ ma gbasaa ya ma gbasaa ya niile.
Site na purulent sinusitis , nwa ahụ nwere mgbaàmà ndị a:
ọdịdị nke na-esi na imi apụta;
abawanye na ọnọdụ okpomọkụ ruo 39 ° C.
Mgbaàmà nke frontitis:
ihe mgbu n'elu imi mmiri (n'egedege ihu), ike mgbe niile;
isi ọwụwa ahụ na-ebelata mgbe ọ wụpụsịrị ihe ahụ;
mmebi nke iku ume n'ehihie;
na nnukwu ihe - mgbu na anya na photophobia.
Mgbaàmà nke ethmoiditis:
ịpị ihe mgbu n'ime imi, imi na n'azụ anya;
na-ekpofu mmiri, mgbe ahụ, fụrụ akpụ ka purulent;
ọnụ ọgụgụ dị ike na ísì;
Mgbaàmà nke genyantritis:
ọdịdị nke nchekasị ma ọ bụ n'okpuru anya (na otu ma ọ bụ n'akụkụ abụọ);
ihe na-enweghi nsogbu na ụlọ nsọ ma ọ bụ n'egedege ihu;
mbupu site na imi, akpa mucous wee purulent;
ụda na ọkụ.
Mgbaàmà nke sphenoiditis:
isi ọwụwa na mpaghara ihu ihu (dị n'isi na isi) ma ọ bụ n'azụ isi;
ọnụ nkọ na ọhụụ.
Ihe mgbaàmà ọ bụla nke sinusitis dị iche iche ka a na-akpọkwu n'ime ụmụaka n'ụdị ọrịa ahụ karịa nke na-adịghị ala ala, mana ọ ga-eme ngwa ngwa ruo ọgwụgwọ. Nke a bụ eziokwu karịsịa banyere ikpo ọkụ nke anụ ahụ, nke na-adịghị arị elu sinusitis na-erughị 37.5 Celsius C na ọnọdụ ahụ dum (adịghị ike, malaise, ụkọ nri, wdg).
Ụmụaka ndị na-arịa ụdị ọrịa na-adịghị ala ala na-enwe ike ịrịa ọrịa nile na ọrịa catarrhal, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ha na-enwekarị mkpọchi, isi ọwụwa na ihu mgbu ihu. Ọtụtụ mgbe a na-achọpụta ụmụaka ndị a dịka ọdịdị dị na nsụgharị nke anụ ahụ nke mba ọzọ, usoro nke polyps na cysts.
Ya mere, iji gbochie ngbanwe nke nnukwu ụdị sinusitis nke na-adịghị ala ala, na mbido nke ọhụụ nke ọtụtụ mgbaàmà ndị a na-ahụ maka ọrịa a, a na-atụ aro ka ị gwa dọkịta ka ọ nyochaa nke ọma na nhọpụta ọgwụgwọ kwesịrị ekwesị.
Nwatakịrị ahụ daa ma tụọ isi ya
Ọrịa Ray na ụmụaka
Kedu ka pox ọkụkọ si amalite n'ime ụmụaka - ihe ịrịba ama mbụ
Herpes akpịrị akpịrị n'ime ụmụaka
Espumizan maka ụmụ amụrụ ọhụrụ - iwu dị mkpa iji mee ihe
Hypotrophy na ụmụaka
Olee otu esi emeso umuaka umuaka?
Deformation nke obi
Tetralogy nke Ụgha na ụmụaka
Asthma - mgbaàmà na ụmụ
Ogwu nje maka angina n'ime umu - aha
Mgbochi na nwa 1 afọ
Hofitol maka ụmụ amụrụ ọhụrụ
Ụmụ ejima Siamese - ihe kpatara ọmụmụ na ihe atụ nke ịhapụ nke abụọ monochorion twins
Kedu ụdị okpomọkụ dị na nwamba?
Ụdị nke a na-agbaso na 2013
Ihe ncheta nke Afọ Ọhụrụ site na beads
Ultrasound nke nwa ebu n'afọ 12 izu
Ugbo ọka na-enweghị ntụ ọka
Azụ na ogwu na oven
Kedu ihe edo edo edo na-enye?
Akpụkpọ anụ na aka aka
Pearl porridge - esi esi esi nri?
Kedu otu esi eme ka gị na nwoke dị n'udo?
Atụmatụ nke ọdịdị nke akpanwa
Britney Spears bu ụzọ pụta na Sam Asgari
Kedu ụdị akwụkwọ ngebichi ịhọrọ maka ime ụlọ?
Ihe omuma na ihe di egwu banyere Iceland
Nyochaa akwụkwọ "The Earth" - Elena Kachur
Nri kacha mma maka ọnwụ
Salads na beets - Ezi ntụziaka
Ịdị ọcha nke okwu
Nri nri maka ọkụkọ
Ọgba aghara-nrụsi ike
Agụmakwụkwọ na-achị ụwa - enwere ohere ọ bụla maka ndụ nkịtị?
Mgbidi ahụ n'ime ime ụlọ
© 2021 ig.unistica.com